Ny mpiara-miombon'antoka amin'i Daniel Bryan teo aloha dia miresaka raha izy no tsara indrindra manerantany (Exclusive) - Wwe
Ny mpiara-miombon'antoka amin'i Daniel Bryan teo aloha dia miresaka raha izy no tsara indrindra manerantany (Exclusive)
Daniel Bryan dia heverin'ny maro ho iray amin'ireo teknisianina am-perinasa tsara indrindra manerantany. Saingy nieritreritra izany koa ve ny mpiara-miasa aminy?
Nahita an'i Erick Redbeard, aka Erick Rowan, izahay tamin'ny resaka manokana momba ny 'UnSKripted with Dr. Chris Feathersone' ary nanontany azy an'io fanontaniana io izahay.
Ilay lehilahy dia teo aloha #Smack down Tag Team Champion ary @TheRock mpanohitra farany ... ary manatevin-daharana an'i Dr. Chris Featherstone LIVE anio hariva izy!
Misambotra UnSKripted amin'ny 11 PM EST: https://t.co/fm3DeWvITu @ErickRedBeard @chrisprolific pic.twitter.com/LvFouNsfFl
toetra tadiavina amin'ny lehilahy
- Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) 8 Jona 2021
Azonao atao ny mijery an'i Erick Redbeard miresaka an'i Daniel Bryan, The Wyatt Family, ary maro hafa amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany. Misoratra anarana amin'ity fantsona ity raha te hahita votoatin'ny tolona mpihetsiketsika toa an'io natiora io:
Erick Redbeard dia nidera ny fahaizan'i Daniel Bryan ao anaty peratra
Daniel Bryan sy Erick Rowan dia nandresy tamin'ny Tompondakan'ny Tompondakan'ny ekipa WWE SmackDown Tag Team nandritra ny fotoana niarahan'izy ireo ho vondrona iray tamin'ny 2019.
Nisaraka izy ireo tamin'io taona io ihany rehefa nambara fa i Rowan dia tao ambadiky ny fanafihana tany ambadiky ny Roman Reigns, tamin'izany fotoana izany dia nifanandrina mihitsy i Daniel Bryan sy ilay mpianakavy Wyatt teo aloha.
te ho faly indray aho
Rehefa nanontaniana izy raha mieritreritra fa i Daniel Bryan no tsara indrindra eto an-tany, dia nanana valiny mahaliana i Redbeard tamin'ny voalohany. Nihomehy izy fa i Mike Bennett no mpikomy indrindra eto an-tany.
'Mike Bennett no tsara indrindra amin'ny tontolon'ny tolona (Hehy)'
Redbeard dia nanoratra ny tenany avy eo ary nandatsaka fiderana an'i Daniel Bryan. Nanohy nanambara izy fa mahafinaritra ny miara-miasa amin'i Bryan amin'ny maha mpiara-miasa sy mpanohitra azy.
'Nefa tsia, lehibe an'i Daniel. Hadalana izany raha tsy mianatra zavatra aminy. Fanampin'izay, nahafinaritra ny niara-niasa taminy ary nahafinaritra ny niasa nanohitra azy, ka ... 'hoy i Erick Redbeard.
Na i Daniel Bryan na i Erick Rowan dia samy miasa amin'ny WWE amin'izao fotoana izao, ary azo atao izany raha toa ka misokatra ny raharaha dia afaka mivory ao amin'ny faritra tsy miankina izy ireo. Na izy ireo misafidy ny hilahatra indray na hiasa mifanohitra dia mbola ho hita eo.
ahoana no hataoko matoky anao indray
. @DirtyDMantell nametraka ny antony mahatonga an'i Daniel Bryan mihoatra ny taloha mihoatra ny taloha. Vakio sy jereo eto @SKWrestling_ #Smack down https://t.co/MTNIxthH67
- Kevin Kellam (@Kevkellam) 1 Mey 2021
Ahoana ny hevitrareo lahy? I Daniel Bryan ve no teknisianina anaty peratra tsara indrindra eran'izao tontolo izao? Raha tsy izany dia iza no hofidinao ho kandidà amin'izany? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany.
ahoana no ilazanao amin'ny olona iray fa tsy tianao izy ireo
inona no dikan'izany raha olona marivo
mety raiki-pitia aho
maninona aho no tsy mitomany rehefa malahelo aho
ny fomba hiatrehana ny lainga amin'ny fiarahana